★မြန်မာ့အလင်း★: Allahကို ပုန်ကန်နေသော မြန်မာပြည်မှ ကျွန်ကုလားများ
မွတ်ဆလင်များသည် ရူးကြောင်ကြောင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ မွဆလင်များထဲမှ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရုံမကပဲ ကျွန်စိတ်ပေါက်နေသူတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှ ကျွန်ကုလားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့တွေရဲ့ သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရပ်တွေက မတရားသဖြင့် စစ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလားမကြီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ကုလားပေါင်းများစွာကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပြီးမှ မွတ်ဆလင် အတင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုလို့ လူမမြင်တဲ့နေရာမှာ ကျင့်တယ်မထင်ပါနဲ့။ ကုလားမတွေကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး ဆာလှီကြီးကို လှန်ထားပါတယ်. . . ကုလားတွေကို ကြည့်ခိုင်းပါတယ် … ပြီးမှ . . . အာ၇ပ်တွေက ကုလားတွေရှေ့မှာ ကုလားမကြီးတွေရဲ့ စအိုပေါက်တွေကို တဗုံးဗုံးနဲ့ အသံမြည်အောင် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာလူမျိုးရေးအရ စော်ကားတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။ သက်ရှိတွေသာမကပဲ ကုလားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာအဆောက်အဦးတွေနဲ့ စာပေတွေလည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ (အခုဆိုရင် ပါကစ္စတန်မှာ အာရပ်အက္ခရာကိုပဲ သုံးနေရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် စာပေကတော့ အဖျက်ခံခဲ့ရလို့ မရှိတော့ပါဘူး) အဲလောက်အထိ လူမျိုးရေးအရ စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စကို ကုလားအားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလားတွေ ရှက်တယ်မထင်ပါနဲ့ …. သူတို့က ဒေါသလဲမထွက်ပါဘူး. . . . မယုံကြည်နိုင်အောင် ထူးခြားစရာ ကောင်းတာကတော့ . . . . သူတို့အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အာရပ်တွေကို ကျေးဇူးတင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို စိတ်ထားရှိတဲ့ ကုလားတွေကို ကျွန်ကုလားလို့မခေါ်ရင်.. ဘယ်နေရာမှာ "ကျွန်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးမလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
ဟဲဟဲ.. ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ပျူတာခေတ်ကြီးမှာ လူသားတွေဟာ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှု ပိုမိုမြင့်လားသည်နှင့်အမျှ . . . ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ နဲ့ ဂျူးအယူဝါဒတွေကို ဝေဖန်မှုတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအဝေဖန်တဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဖတ်ပြီး.. စဉ်းစား တွေးခေါ်ကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဝါဒကို ဝေဖန်ရင် ခရစ်ယာန်တွေက ဖတ်ကြပါတယ်။ စဉ်းစား တွေးခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိန္ဒူ. . . ဂျူးတွေကလဲ အဲလိုပါပဲ။ ထူးခြားနေတာကတော့ မွတ်ဆလင်ပါပဲ။ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဝေဖန်တဲ့စာတွေမှန်သမျှ ... မွတ်ဆလင်တွေခမျာ ဖတ်ခွင့်မရကြဘူး။ မွတ်ဆလင်ဝက်ဆိုက် အားလုံးဟာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့်ကို လုံးဝမပေးရဲ ကြဘူး။ မေးခွန်းလဲ အထုတ်မခံရဲပါဘူး။ ထို့အတူ့ပဲ မွတ်ဆလင်အစိုးရတွေကလဲ ဝေဖန်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို ဘန်းထားကြပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုကို မှတ်ကျောက် တင်ခွင့်မရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဘ၀ဟာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ဘာများကွာလို့လဲနော်? နောက်ပြီးတော့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ဟာ အခြေခံအကျဆုံး လူအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မယုံကြည်ရင် ချက်ချင်းထွက်နိုင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ကို မယုံကြည်ရင် ချက်ချင်း ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူကို မယုံကြည်ရင် ချက်ချင်းထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဂျူးကို မယုံကြည်ရင် ချက်ချင်းထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေကတော့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ ထွက်ခွင့်မရကြရှာပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားဆုံးလို့ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်နေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာတောင် မွတ်ဆလင်ကနေ ထွက်ခွင့်မရပါဘူး။ ကဲဗျာ… ဒီခေတ်ကြီးမှာ အခြေခံအကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးကို မခံစားရတဲ့ သူတို့ဘ၀ကို သနားသင့်ပါပြီ။
အခုလည်းပဲ ပါကစ္စတန်မှာ ရေးကြီးပြီး နိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံဟာ ရေအောက်မြုပ်နေပါပြီ။ မွတ်ဆလင်တွေက သဘာဝကြောင့် ဘေးအန္တာရယ်ဖြစ်တယ်လို့ လက်မခံပါဘူး။ ALLAH က လူသားတွေကို ဒေါသထွက်ပြီး အပြစ်ပေးတယ်လို့ပဲ ယူဆကြပါတယ်။ ALLAHA တစ်ကောင်ဟာ အင်မတန် ဒေါသကြီးပြီး လူသားတွေအပေါ် ရက်စက်မှုအမျိုးမျိုး လုပ်တယ်ဆိုတာ ကုလားတိုင်းက လက်ခံထားပါတယ်။ (မယုံမရှိနဲ့။ နောက်ပြောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားတွေ ALLAH ကို ကြောက်ကြတာ အဲဒါကြောင့်ပါပဲ) မွတ်ဆလင်တွေကို သတိပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်။ အခုပါကစ္စတန်မှာ ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟာ ALLAH က မွတ်ဆလင်တွေကို အသေဆိုးနဲ့ သေအောင် သတ်နေတာပါ။ Allahက ဘာပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေ ဆန့်ကျင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ သိထားကြပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က ကျွန်ကုလား ၀က်ဆိုက်မှာ ရေးကြီးပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ALLAH က လူတွေကို သတ်နေတာကို ၀င်ပြီးတားတဲ့သဘောပါပဲ။ နားလည်အောင်ပြောရရင် ALLAHက လက်နဲ့ရေးတာကို ခြေနဲ့ ဖျက်တာပေါ့။ တနည်းအားဖြင့် ALLAHကို တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ALLAH ရဲ့ အခုလုပ်ရပ်ဟာ လူမဆန်ပဲ ရက်စက်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ALLAH ကို ပုန်ကန်ဖို့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ MYANMAR MUSLIM ၀က်ဆိုက်ဟာ. . . ကျွန်ကုလားတွေကို ငရဲရောက်အောင် အကောက်ကြံနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါတယ်။ ဒန်..ဒန်... ဒန်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 2:55 PM
ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ရူးကြောင်ကြောင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာများထဲမှ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရုံမကပဲ ကျွန်စိတ်ပေါက်နေသူတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှ ကျွန်ဗမာများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့တွေရဲ့ သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂေါတမနောက်လိုက်တွေက မတရားသဖြင့် စစ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာမကြီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ဗမာပေါင်းများစွာကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ အတင်းလုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုလို့ လူမမြင်တဲ့နေရာမှာ ကျင့်တယ်မထင်ပါနဲ့။ ဗမာမတွေကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး ထဘီကြီးတွေကို လှန်ထားပါတယ်. . . ဗမာကောင်တွေကို ကြည့်ခိုင်းပါတယ် … ပြီးမှ . . . ဗုဒ္ဓနောက်လိုက်တွေက ဗမာကောင်တွေရှေ့မှာ ဗမာမကြီးတွေရဲ့ စအိုပေါက်တွေကို တဗုံးဗုံးနဲ့ အသံမြည်အောင် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာလူမျိုးရေးအရ စော်ကားတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။
သက်ရှိတွေသာမကပဲ ဗမာတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ စာပေတွေလည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်...(အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ကုလားစာပေ ပါဠိကို အထွဋ်အမြတ်ထားနေရပါတယ်... ကိုယ်ပိုင်စာပေကတော့ ကုလားပါဠိလောက် အဆင့်မရှိတော့ပါဘူး) အဲလောက်အထိ လူမျိုးရေးအရ စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စကို ဗမာအားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗမာတွေရှက်တယ်မထင်ပါနဲ့ …. သူတို့က ဒေါသလဲမထွက်ပါဘူး. . . . မယုံကြည်နိုင်အောင် အံ့သြစရာ ကောင်းတာကတော့ . . . . သူတို့အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓနောက်လိုက်တွေကို ကြည်ညိုပြီး ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို စိတ်ထားရှိတဲ့ ဗမာတွေကို ကျွန်ဗမာလို့မခေါ်ရင်.. ဘယ်နေရာမှာ "ကျွန်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးမလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
ဟဲဟဲ.. ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ပျူတာခေတ်ကြီးမှာ လူသားတွေဟာ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှု ပိုမိုမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ . . . အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ နဲ့ ဂျူးအယူဝါဒတွေကို ဝေဖန်မှုတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။ အစ္စလာမ်ကိုဝေဖန်တဲ့အချိန်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဖတ်ပြီး.. စဉ်းစား တွေးခေါ်ကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဝါဒကို ဝေဖန်ရင် ခရစ်ယာန်တွေက ဖတ်ကြပါတယ်။ စဉ်းစား တွေးခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိန္ဒူ. . . ဂျူးတွေကလဲ အဲလိုပါပဲ။ ထူးခြားနေတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို ဝေဖန်တဲ့စာတွေမှန်သမျှ ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေခမျာ ဖတ်ခွင့်မရကြဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝက်ဆိုက် အားလုံးဟာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့်ကို လုံးဝမပေးရဲ ကြဘူး။ မေးခွန်းလဲ အထုတ်မခံရဲပါဘူး။မေးခွန်းထုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ညစ်ပတ်ရိုင်းစိုင်းစွာနဲ့ဆဲဆိုကြပါတယ်။ ထို့အတူ့ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစိုးရတွေကလဲ ဝေဖန်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို ဘန်းထားကြပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုကို မှတ်ကျောက် တင်ခွင့်မရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ဘာများကွာလို့လဲနော်? နောက်ပြီးတော့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ဟာ အခြေခံအကျဆုံး လူအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စဘာသာကို မယုံကြည်ရင် သူ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သူပါ။ ခရစ်ယာန်ကို မယုံကြည်ရင် သူ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သူပါ။ ဟိန္ဒူကို မယုံကြည်ရင် သူ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သူပါ။ ဂျူးကို မယုံကြည်ရင် သူ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ သူတို့ထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက်ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် အဒီဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် ပုတ်ခတ်ဆဲဆိုပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြသနာရှာ ဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲ...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များခမျာမှာ အဲလိုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီး ထွက်ချင်ပေမယ့်လည်း မထွက်ပဲ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ဆိုသလို သူများဒုက္ခမဖြစ်အောင် ကိုယ်ပဲဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ဒုက္ခကြီးကို ခါးစီးခံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး နေကြရတော့ပါပဲ... ကဲဗျာ… ဒီခေတ်ကြီးမှာ အခြေခံအကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးကို မခံစားရတဲ့ သူတို့ဘ၀ကို သနားသင့်ပါပြီ။
သနားလိုက်တာနော်...ဟိဟိ ခိခိ ခွိ...။